Mabuto - Gpedia, Your Encyclopedia
Mabuto waa caasimada dalka Musanbiig waxa ay ku taalaa xeebta Badweynta Hindiya. Waxa ay aad iyo aad ugu dhawdahay xudduuda Koonfur Afrika. Waxaanay u jirtaa masaafo gaadhaysa 77 klm, dadka ku nooli waxa ay tira ahaan dhanyihiin 1099102 oo qof sida uu sheegay tirakoob lasameeyay 2007
Goobta ay kutaalo
Mabuto waxa ay ku taalaa dhanka galbeed ee qooriga looyaqaano (Mabuto). Meel u dhaw halka uu badda kaga daro webiga Tenbi
Magalada Mabuto waxa la'aasaasay sanadkii 1876, waxana loogumagacdaray markii hore nin la odhanjiray,Lourenço Marques waxa uu ahaa taajir butuqiisa waana ninkuu helay magaalda mabuto 1544.waxa ay leedahay magaaladu khad tareen oo kuxidha koonfur afrika.
Gegida dayuuradaha ee magaalda mabuto waa ta ugu wayn wadanka oo dhan
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Mabuto&oldid=188056"